Malagasy aho: Hafatry ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana
Hafatry ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana
Antso antariby, sabotsy 25 jolay 2009
Miarahaba anareo Vahoaka marobe tonga eto amin’ity toeran’ny ara – dalàna ity. Zava dehibe loatra ny fahafantarana izany hoe Vahoaka mahalala ny fanajana ny ara – dalàna izany ary hisaorako anareo manokana ny fahendrena hanananareo mahafantatra hoe tsy misy fanjakana na firenena mandroso raha tsy manaraka ny ara – dalàna ka dia ny fitokanana ity toerana ity ho toeran’ny ara – dalàna dia zava – dehibe loatra ka enga anie ny firenentsika mba ahalala izany ny mpitondra hoe manaja ny ara – dalàna sy mahafantatra tsara izay mahasoa ny Vahoaka Malagasy izany. Koa dia miarahaba antsika rehetra, miarahaba ny Vahoaka Malagasy rehetra, indrindra indrindra amin’izao fotoana izay efa eo ankatoky ny fanomanana fihaonanana ary indrindra indrindra amin’ny fanampian’ireo firenena aty ivelany. Tsy mandry andro, tsy mandry alina aho fa lazaiko anareo, mifampiresaka sy mifampidinika amin’ireo firenena lehibe sy ireo fikambanana iraisam – pirenena hijerevany manokana ny firenena Malagasy. Ankehitriny dia efa mijery sy manadihady ny fomba rehetra azontsika atao aho mba hanarenana haingana dia haingana ny fiainan’ny malagasy ary hanampiana ireo tena sahirana.
Hoy aho aminareo, mahatsiaro mandrakariva aho ny niarahantsika, ny nanaovana ny asa teto Antananarivo, tany amin’ny faritra, ny lalana vita, fa indrindra indrindra mahatsiaro ny fahasahiranana mahazo anareo aho ankehitriny. Ry Vahoaka Malagasy, fantatro fa miezaka miandry ianareo, na izaho koa aza dia dodona dia dodona, kanefa tsy maintsy atao izay ahafahantsika mijery izay fomba fametrahana ny stabilité politika eto Madagasikara ary mba hanana izany hoe mpanao politika matihanina izany isika.
Mahafantatra tsara hoe ohatry ny inona ny fitondrana firenena fa tsy samy manao izay saim – pantany akory
Mahafaly ahy, mahafaly ahy hoy aho aminareo ny mahita ny fanampian’ny firenena rehetra antsika eto Madagasikara. Tonga taty Antananarivo ny solontenan’ny Union Européenne, manaramaso ny solontenan’ny firenena mikambana ary indrindra indrindra manao ny asany ny SADC sy ny COMESA hanampiana an’i Madagasikara mba hivoahana amin’izao fahasahiranana, krizy ara – politika izao.
Mino sy manantena isika, fa ny tombontsoa ambonin’ny firenena no ao an – tsain’ireo olona rehetra izay mihevitra sy mahalala ny tenany hoe manao politika sy manao zavatra politika fa tsy ny tombontsoa an’azy irery na hoe ahazoana seza na ahazoana vola fa aoka re izay mba tena tombontsoan’ny vahoaka, koa miantso ny mpanao politika aho mba hanana izany fahalalahan – tsaina izany, izany fijery lavitra izany, satria tsy ny ho amintsika amin’izao fiainantsika izao ihany no jerena fa ny ho an’ireo taranaka, ho an’ireo zanaka rahatrizay.
Faly aho mahita anareo vory eto marobe ary maheno anareo mihorakoraka eo ary tena faly tena faly tokoa aho mahita ny fihetsika marina ary mampiseho ny fahendrena malagasy, Hody i Dada fa aza matahotra, hody i Dada fa aza matahotra ianareo.
Ny zavatra anankiray tiako ho fantatra ihany koa amin’izao fotoana izao dia ireo fihetsiketsehana izay atao any amin’ny faritra, ny amin’ny renivohi – paritany satria mahatsiaro koa ny any fa afaka atsy ho atsy dia tena hikatso ny fiainana amin’ny andavan’andro ary mahalala sy mahita izy ireo ny zavatra manjo ny firenena indrindra ny eto andrenivohitra, koa aoka re mba hiray saina isika mpitondra ahafantatra tsara fa hoe ho ho an’ny ho avin’ny taranaka sy ny firenena. Ny firenentsika dia efa nandrandrain’izao tontolo izao indrindra fa taty amin’ny kaontinanta afrikana hoe Madagasikara no nofidian’ny Union Européenne hoe firenena mahafapo indrindra taty Afrika. Indrisy anefany, tsy hitantara ny zava – misy intsony aho fa tia hisarika sy hisintoka ny masontsika ho amin’ny ho avy.
Minoa ianareo fa raha ohatra ka samy mampiseho ny fahendrena hananany toa anareo izao ny mpitondra ary izahay samy mahatsapa tena fa ny soa toavina malagasy sy ny fahendrena amin’ny fihavanana no tanteraka, vitantsika ny mampandroso ara – toekarena an’i Madagasikara. Manampy an’i Malagasy aho amin’izao fahasahiranana mahazo azy izao, koa mahereza, mahereza fa tena manao arak’izay azo atao mihintsy aho aty miaraka amin’ireo mpiara – miasa rehetra sy ireo firenena mpiara – dia sy manohana antsika. Tsy maintsy atao izay hanafahana an’i Madagasikara arak’izay azo atao. Mahatoky aho fa ireo firenen – dehibe izay manohana antsika, anisan’izany ireo firenena izay heverintsika fa hoe dia tena manadino an’i Madagasikara na manaratsy an’i Madagasikara dia efa mba miova hevitra amin’izay, efa mba mahatsiaro fa fadiranovana ny Vahoaka ka tokony tohanana izay politika eken’ireo vahoaka malagasy maro an’isa hiverenana amin’ny ara – dalàna. Mino aho fa olon – kendry ny mpitondra ireny firenena matanjaka ireny, mba hijery manokana ny fiainan’ny vahoaka malagasy, ireo vahoaka hendry, vahoaka mahalala ny tokony ataony. Efa mahatsapa aho sy mahita fa efa miray hina tsara ny Communauté Internationale. Misy ihany ny mandefa tsaho izao any ivelany any ary indrindra fa any Madagasikara milaza fa hoe ny hijanonako aty maka ireny mpikarama an’ady ireny na mercenaire, tsia, tsy izaho mihintsy no handeha haka olona hamono malagasy, tsy izaho mihintsy izany. Koa dia milaza aho ary manambara aminareo fa ny soa ho an’ny Malagasy, ho an’ny taranaka mifandimby no katsahiko, ary efa nanokana ny fotoanako hanaovana izany aho. Mahatoky fa isika rehetra, ianareo rehetra samy manana izany fisainana izany avokoa, koa raha misy resaka mandeha etsy sy eroa hoe ny antony hijanonako aty Afrique du Sud dia hoe manakarama ireo mpikarama an’ady, diso, diso tanteraka izany, ary azo hamarinina raha misy an’izany any Madagasikara, azo fantarina ary azo jerena hoe iza no manao azy, sao dia tsy avy aty amintsika no manao azy. Koa dia misintona ny sainareo aho mba tena hilamina, aoka ny hetraketraka, ny fanimbana zavatra, ny famonoana ny samy malagasy ireny, samy malagasy isika. Ary indrindra ny fisamborana tsy amin’ny antony ireo olona ireo. Mba jereo re ny zo aman – kasin’ny olona, fa tena maty hasina tanteraka ilay olona tsy nanam – po n’inon’inona nefa dia gadraina amin’ny tsy misy antony. Mba manana ny hasina maha izy azy ihany, ny zo maha olombelona azy, samia mieritreritra ianareo. Ary izy ireo no milaza fa hoe misy mametraka ireny explosif ireny na ireny zavatra mipoaka ireny, na avy aiza na avy aiza dia tena manameloka ireny aho satria tsy ankasitrahantsika mihintsy izay hisian’ny korontana sy hisian’ny fahasimban – javatra izany.
Mankahery anareo aho ry Vahoaka Malagasy ary mahatoky aho fa manampy antsika Andriamanitra fa ho tanteraka ny fihaonantsika mba ahafahana mampiverina indray ny fiainan’ny vahoaka malagasy toy izay niarahantsika nandritra ny fito taona misy, na mihoatra izay. Koa dia mametraka amin’ny manaraka indray aminareo toy izao.
Publié par Malagasy aho à 22:15
Marc Ravalomanana : cela ne vient pas des légalist...